¿Qué son los productos estructurados? | Economía Finanzas
Mari yekudyara ndeimwe yeiyo maturusi anosarudzwa nechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Asi mune yayo yakarongeka maitiro, inopa fomati umo purofiti inogona kuve yakakwira kupfuura mune echinyakare mamodheru. Nekudaro, zvinounza njodzi zhinji mukushanda sezvo chiri chakaomesesa chigadzirwa chemari chinoda ruzivo rwevashandisi. Izvo chaizvo nekuda kweichi chikonzero kuti haina kukodzera kune ese profiles evadiki nepakati varimi. Asi asi kune avo vane ruzivo rwakawanda mumhando iyi yekufamba mumisika yemari.
Zvigadzirwa zvakavakirwa zvirokwazvo zano rinoshanda kwazvo kukunda kusimba kwekuita parizvino kunopihwa zvigadzirwa zvebhangi. Semuenzaniso, maakaundi ane mari yepamusoro, mareti emari kana chero chimwe chinobva muchikwereti cheveruzhinji. Iko mune ese iwo iwo mwero we1% hautombo pfuurwa semhedzisiro yemutengo unodhura wemari mudunhu reyuro. Kusvika padanho rekuti izvo zvinobatsira zvigadzirwa zveva saver zvavo
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinonyanya kuzivikanwa neyakavakirwa yavo, kusvika pakuti ivo vakasiyana zvakanyanya kubva kune zvakajairika mari yekudyara. Mupfungwa iyi, zvinosanganisira iyo kubatana kwezviviri kana kupfuura zvigadzirwa zvemari pasi pekugadzirwa kwakafanana kana chimiro. Kazhinji, chakanyanya kuwanda musanganiswa weyakagadziriswa mari chigadzirwa pamwe chete kana zvimwe zvinobva. Semhedzisiro yemaitiro aya, akaomesesa kupfuura mamwe. Uye sezvazviri zvine musoro kuti vanzwisise, vane njodzi yakakura nekuti havavimbisa kudzoka kwakamisikidzwa gore rega rega.
1 Mhando zvigadzirwa zvakagadzirwa
2 Yakagadziriswa kufarira kudyara
3 Yakagadziriswa mari gore rega
4 Dzosera mari yakaiswa
5 Mhando dzemari dzinovimbiswa
6 Kuwedzera purofiti?
Mhando zvigadzirwa zvakagadzirwa
Kana isu tikachinjira kune njodzi yekuti kirasi yezvigadzirwa inogona kuverengeka, tinoona kuti inogona kusiyaniswa mumapoka maviri akanyatsotsanangurwa uye kuti ndeavo vatinofumura pazasi:
Zvigadzirwa zvakagadziriswa zvine capital garandi Pakukura: ndezvipi zvigadzirwa zvemari izvo zvine basa rekudzorera iyo yese mari yakaiswa pakukura. Chero zvazvingaitika, ndidzo dzinounza njodzi diki pakati pevashambadzi vadiki nepakati sezvo ivo vachitongwawo neBhangi reSpain chairo uye rakafukidzwa neDepositi Guarantee Fund. Mukuita, izvi zvinoreva kuti ivo vanovimbisa isu kusvika ku100.000 euros pamunhu uye chigadzirwa, sezvazviri kune yakatarwa-temu bhangi dhipoziti.
Imwe modhi, yakanyanya kuomarara, ndiyo inoreva zvigadzirwa zvakagadzirwa zvine njodzi. Mune ino kesi, ndeavo avo havana garandi yemari pakukura uye kudzoka kwayo kuchagadziriswa nekushanduka kwechinhu chiri pasi. Ichi ndicho chikonzero chekutarisa kuti ivo vakaomesesa uye kuti vanogona kutokonzeresa kuti iwe urasikirwe nemari munzvimbo dzawakavhura mavari. Sezvazviri mumhando yapfuura, ivo vanodzorwa neBhangi reSpain chairo uye rakafukidzwa neDepositi Guarantee Fund. Ndicho chikuru pane zvese zvivimbiso zvinopihwa kune avo vanobata.
Yakagadziriswa kufarira kudyara
Kana izvo zvauri kutsvaga chiri chengetedzo yekudyara kwako pamusoro pehumwe hunhu, iyi ndiyo tsika inogona kugutsa yako yaunoshuvira zvishuwo. Kwete pasina, iwe unofanirwa kuongorora kuti pakupera kwezuva iwe unenge uchiisa mari yako mune dhipoziti pane yakatarwa uye yakavimbiswa mubereko. Asi kana izvo zvaunoda, pane zvinopesana, zviri yepamusoro purofitiKune zvakare mafomati anoremekedza iyi sarudzo mukati meakarongeka dhipoziti chikamu Ndokunge, iwe uchaisa mari mune yakarongeka dhipoziti pane kusiyanisa kufarira.
Panyaya yekugadziriswa dhipoziti, purofiti inogara ichivimbiswa. Ndichiri pane zvinopesana, mune nyaya ye shanduko tangi, iyo kufarira kunozoonekwa nekushanduka kweiyo indices yeiyo aseti iyo iyo mari yakaitwa. Uyu mutsauko wakakura pakati penzira mbiri dzekudyara. Asi pasina kusiya chigadzirwa chimwe chete, mune ndechipi chimwe chehunhu hunhu zvine chekuita nezvimwe zvigadzirwa zvinoitirwa kudyara. Chinhu chinogona kukwezva huwandu hwakanaka hwevatengi kune aya mafomati akagadzirwa nemabhangi mumakore apfuura.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveichi chakakosha chigadzirwa chebhengi ndeyekuita kwayo. Nekuti zvirokwazvo, kazhinji, vimbisa kusvika 1% kudarika kukosha kwedhipatimendi rakabatanidzwa, zvisinei nemhando yemari inosarudzwa nemutengi webhangi iye pachake. Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kusimbiswa kuti mune chiitiko cherufu netsaona, iyo yekuwedzera bhenefiti ichave 51%. Mune yakatarwa-mwero madipoziti, kune rimwe divi, inozosimudzirwa neyakavimbiswa yakatarwa chiyero chemari, uye mune iyo yakarongedzwa nekushanduka kweiyo indices inofungidzirwa mune yega yega yevimbiso nguva yakasimbiswa mune yakabatana asset.
Kune rimwe divi, zvinonakidza kwazvo kuziva izvo inishuwarenzi yehupenyu inovhara. Zvakanaka ipapo, kana zvadaro kufa kweinishuwarenzi, iyo inishuwarenzi inopa imwezve bhenefiti ye1% yezvinhu zvakabatanidzwa mukudyara, zvisinei nechikonzero cherufu, nemipimo zvichienderana nezera. Panyaya yekufa netsaona, iyo yekuwedzera bhenefiti ichave 51% yeiyo mari kukosha.
Dzosera mari yakaiswa
Mumwe wemibvunzo inobvunzwa nevakawanda vanobata ichi chigadzirwa chemari ndechekuti zvinoita here kuti vadzore iyo mari isati yapera. Zvakanaka, mune ino pfungwa, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mune yega yega nyaya mukana wekutanga kununurwa unotsanangurwa. Iko kukosha kwekudzikinura kunozobva pane kukosha kwemusika kwezvinhu zvakabatana. Nekudaro, zvinokwanisika kuti aya ekudyara mamodheru haakwanise kunyoreswa kunze kwenguva yavo yekutengesa. Uye mune izvo, hapazove nesarudzo kunze kwekumirira zuva nyowani rekuburitsa mune idzi dzakatsigirwa mari yekudyara.
Kunyangwe pane zvinopesana, pane zvakare mukana wechokwadi wekuti mari idzi dzinogona kuverengerwa kunze kwenguva yetemu. Asi nedambudziko rakakomba uye ndizvozvo vanogona kunge vari vakarangwa nemakomisheni akakwirira kwazvo uye pamusoro pechinyakare. Kusvika padanho rekukanganisa kubatsirwa kwekupedzisira kweichi chakakosha mari yekudyara. Kugumisa kuti harisi basa rinobatsira, kure nazvo. Asi, inotakura kufarira kuchazove kushomeka kubva kune ese maonero maonero.
Mhando dzemari dzinovimbiswa
Chero nzira, iyi imwe nzira yekudyara anovimbisa 100% yemari mutora chikamu kutanga. Kunyangwe ichikosheswawo kwazvo chokwadi chekuti pakupedzisira panogona kunge paine kana panogona kunge paine imwe purofiti. Kuburikidza nemakirasi maviri ezvekudyara nzira, iyo inomiririrwa neyakagadziriswa goho uyezve iyo inowirirana goho. Nezve yekutanga mafomati, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, pamusoro peguta guru, iro rinotarisira rinovimbisa kuwana kwedzidzo yekuwedzera, inowanzo kuratidzwa muyero yechimbadzo inogona kusvika 1% kana 2%.
Nezvemari inodzoserwa yekudzoka, nzira dzacho dzakatosiyana zvakanyanya sekuzoona pazasi. Nekuti mukuita, senge izvo zveyakagadziriswa goho, vimbisa guta guru pamwe nemukana wekuwana imwe yekudzosera kunoenderana nekushanduka kweiyo index kana share. Muzviitiko izvi, zano iri rakavakirwa pakuzadzisa zvishoma zvinangwa zvine chekuita nemutengo wemasheya, zvikamu kana indices mumisika yemari. Mupfungwa iyi, mari idzi dzakafanana chaizvo nemadhipoziti akanangana nezvinhu zvemari zvakanyorwa pamisika yemari.
Imwe yedzakajairika nzira pakati pevadiki nepakati-saizi idzo inomiririra chirevo chemubvunzo uyu. Huye, kiyi yakakosha iri pakuti ivo vanogona kana havagone kusangana nhevedzano yemamiriro ekuti vadzore yavo kutanga kuburitsa, pasina kurasikirwa kwakabatana. Mupfungwa iyi, hakuzovi nesarudzo asi kuongorora zvakadzama zvese zvese zvine chekuita nekuumbwa kwayo nemamiriro sezvo ichikwanisa kukushamisa kanopfuura kamwe kubva panguva dzino. Icho hachisi chigadzirwa chiri nyore kubata uye unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuziva magadzirirwo ayo mune kumwe kudzika.
Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti izvo zvinonzi mari yakavimbiswa inotengeswa kune a nguva yakatarwa, kuva muzviitiko zvakawanda zvisingaite kuve chikamu chayo kana hwindo rekushambadzira iri ravharwa. Kubva pane ino mamiriro, zvakafanira kuti iwe unorayirwa usati wasaina kondirakiti yeichi chakakosha chemari chigadzirwa kuti urege kuwana chero kushamisika kubva zvino zvichienda mberi.
Sezvo zvichidikanwa kuti garandi ibudirire, uye isu hatizoone kurasikirwa muhondo yedu kana mamiriro emusika asina kunaka. Iko mune kazhinji kacho iwe uchafanirwa kumirira kusvikira kupera kwayo. Nezvekusingaperi zvinofamba mushe zvinobva pamakore matatu kusvika mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndezvipi zvakagadzirwa zvigadzirwa?
Zvikamu zveSpanish stock market